Ndị na -emepụta ihe ịtụ ahịa ịtụ ahịa ihe atụ. Ụlọ ọrụ na -atụpụta ihe atụ nke China
Onye na -atụtụ ihebụ akụrụngwa dị oke mkpa na akụrụngwa ụlọ nkwakọba ihe, ọ na -enwekwa oke ọrụ na ụlọ ọrụ na -ahụ maka ihe. N'ebe a, anyị na -akwado onye na -atụtụ onwe ya nke ukwuu. N'ihi na ọ nwere sistemụ njikwa nha, sistemụ nchedo ọkpọ mmiri, na-ebugharị n'ogo zuru oke, taya na-abụghị akara, sistemụ breeki akpaka, sistemụ mgbada mberede, bọtịnụ nkwụsị mberede, valvụ njigide cylinder na sistemụ nchọpụta ụgbọ mmiri na ihe ndị ọzọ. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma akụrụngwa na -arụ ọrụ n'ụlọ nkwakọba ihe.
A na -emelite onye na -atụpụta ihe atụ onye na -atụpụta onwe ya, ọ nwere ike ibugharị ya n'elu ikpo okwu nke na -eme ka ihe ụlọ nkwakọba ihe rụọ ọrụ nke ọma, ọ dịghị mkpa ibelata ikpo okwu wee kwaga ọnọdụ ọrụ.
Onye na -atụtụ eletriki ọkara na -ejikarị arụ ọrụ ihe nkwakọba ihe, onye ọrụ nwere ike iji ya bulie ngwongwo ma ọ bụ igbe wdg. Nke dị na shelf dị elu.
Site na ike ọkọnọ batrị, ọ nwere ike na -arụ ọrụ ụbọchị niile mgbe chajịchara ụgwọ otu oge. N'otu oge ahụ, enwere onye na -atụtụ ụdị ịtụgharị aka, isi ihe dị iche bụ na mgbe ị na -eji ya, ị ga -emepe ụkwụ nkwado n'ala. mgbe ahụ malite ibuli elu ka ọ rụọ ọrụ. yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwaga onye na -atụ ihe n'usoro mgbe mgbe site n'otu ebe gaa na onye ọzọ, onye na -atụtụ ụdị ịtụgharị akwụkwọ ntuziaka agaghị abụ nhọrọ gị kacha mma.